About Us - saaraha Dongmeng Machinery in china
Dongmeng Machinery (Shanghai) Makiinado Technology Co., Ltd waa soo saaraha weyn oo ganacsi khusaysaa qalabka R & amp; D, wax soo saarka, burburiyo iibinta qalabka, wax soo saarka qalabka ciid qalalan iyo ilaalinta deegaanka qalabka wax soo saarka. Our warshad waxaa ku yaalla Degmada Fengxian, Shanghai, Shiinaha. Waxaan leenahay liisanka ee xaq u dejinta iyo dhoofinta ganacsiga, iyo waxaan sidoo kale ka heli shahaado ee ISO9001: 2000 oo loo gaaro sida AAA summad caan ah, iwm Our warshad ma aha oo kaliya manufactures crushers daanka caadiga ah, crushers saamaynta, birqaya screens, laakiin sidoo kale sameeyo karaa qalabka fasalka-koowaad oo caalami ah sida crushers Euro-style daanka / crushers saameyn euro-style / crushers koorta xarunta / crushers koorta Haydarooliga / mashiinka ugu dambeeyey ee nidaamka TVSI ciid iyo wixii la mid ah.
Khuseeya R technology & amp; D, Shirkadda ayaa si guul leh horumariyo nidaamka qalabka caalamka ugu horumarsan sida nidaamka qaadashada ciid qalalan dhafan, wada ilaalinta deegaanka nidaamka kala go'idda ciid, kaas oo xalin taxane ah dhibaatooyinka suuqa xilligan, sida wax soo saarka hooseeyo / maalgashiga sare / machining faahfaahinta ciid ma u dhigma kartaa heerka qaran, iwm In our warshad, ka dib markii waaxda la xiriira tijaabiyo, waxyaabaha aannu si buuxda u isticmaali karaa C55 kor ku xusan Heerka qaadashada la taaban karo.
Taariikhda our warshad la ogan karo sanadka 2000, waxaan bilownay ka rakibo for warshad dhagaxyo, horumariyo sidii OEM for warshad in dhagaxyo wanaagsan iyo maal in warshad dhagaxyo, iwm lagu guda jiro horumarinta ka badan 10 sano, waxaan dhisay xaddi weyn oo xidhaba , shaqaalaha wax soo saarka iyo blasters khibrad leh, kuwaas oo damaanad qaadi kara Dongmeng Machinery si ay ugu deeqdo macaamiisheena adeega top. Dongmeng Machinery ayaa ku siin kara shaqaalaha farsamo oo lacag la'aan ah si ay macaamiisha our qalabka rakibi in habka wax soo saarka.
Dongmeng Machinery ayaa nidaamka maamulka tayada kaamil ah, dadka kale laga soo ururiyey hormartay technology iyo waxa innovate macaamiishayada iyo u siiyaan waxyaabaha sare. Waxaanu bixinaa adeeg dhameystiran si ay macaamiisha ka mid ah naqshadaynta, iibinta, debugging qalabka iyo dayactirka. Adeegsanaya ulaha top, asaasidda shirkadda top, abuurista brand sare, iyo bixinta adeega sare, aan samaynayno fiican in la sameeyo shirkadda si aan u noqdo mid sare ee Shiinaha. Dongmeng Machinery mar walba ku hayaa maskaxda ku ah "daacadnimo, tayo sare leh & amp; fasalka ugu horeysay "marka aan iibiyo qalabka ama soo bandhigaan adeegeena. By habka this waxaan ku kulmi karaan shuruudaha macaamiisha sii kordheysa kala duwan oo la abuuro qiima badan dadka isticmaala.